Sesiyalazi idethi yokukhishwa kanye nentengo ye-Doogee S98 entsha | Amagajethi Ezindaba
U-Ignacio Sala | 18/03/2022 13:16 | AmaSelula
NgoMashi 28, iDoogee S98 izongena emakethe, i i-smartphone entsha eqinile evela kumkhiqizi u-Doogee, eyaziwa ngokuthi ifoni emangelengele, futhi izokwenza lokho ngentengo ekhethekile yesethulo engu-$239, intengo yesethulo ezotholakala kuphela phakathi kuka-March 28 no-April 1.
Intengo evamile yale divayisi ngu-$339, ngakho-ke umtitilizo oyisingeniso kusivumela ukuthi songe amadola ayi-100. Ngaphezu kwalokho, singabamba iqhaza emdwebeni we-4 Doogee S98 ngewebhusayithi yayo. Kusukela ngoMashi 28 kuya ku-Ephreli 1, singathenga i-Doogee S98 Amadola ka-239 en AliExpress y doogeemall.
1 I-Doogee S98 isinika ini
1.4 Ibhethri lifika ezinsukwini ezi-3
2 Ungayithenga kuphi i-Doogee S98
Indawo yokugcina 256 GB USF 2.2 futhi inwebeka nge-microSD
Isikrini 6.3 amayintshi - FullHD + ukulungiswa - LCD
abanye I-NFC - I-Android 12 – 3 yeminyaka yezibuyekezo
I-Doogee S98, iphethwe iphrosesa IHelio G96 kusuka kuMediaTek. Kanye nephrosesa, sithola u-8 GB we-RAM kanye no-256 GB wesitoreji, isitoreji esingakwazi ukusikhulisa sisebenzisa ikhadi le-MicroSD.
I-Doogee ihlanganisa izikrini ezi-2. Eyokuqala neyinhloko inosayizi we 6 amayintshi. Isikrini sesibili, sithola ku- emuva futhi inosayizi wamayintshi angu-1,1.
Ngalesi sikrini sangemuva, siyakwazi ukubona isikhathi, phatha ukudlalwa komculo, phendula izingcingo, hlola izinga lebhethri, bona imilayezo esiyitholile...
Njengoba ikhamera ingesinye sezigaba abasebenzisi abazinaka kakhulu, abafana base-Doogee bayinaka ngokukhethekile. Ngemuva kwedivayisi, sithola 3 amalensi:
Inzwa eyinhloko ye-64 MP
I-angle engu-8 MP ebanzi futhi
Inzwa yokubona ebusuku engu-20 MP eyenziwe nguSony.
Ikhamera yangaphambili yenziwe ngabakwaSamsung futhi ine Isixazululo se-MP esingu-16.
Ibhethri lifika ezinsukwini ezi-3
Nge 6.000 mAh ibhethri, i-Doogee S98 inokuzimela kwezinsuku ezi-2 kuya kwezi-3 ngokusetshenziswa okusesilinganisweni kwedivayisi.
Kuyahambisana ukushaja okusheshayo kufika ku-33W, neshaja efakiwe yamandla afanayo. Iphinde ihambisane nokushaja okungenantambo.
Ungayithenga kuphi i-Doogee S98
I-Doogee S98 entsha izotholakala ku-Aliexpress naku-Doogeemall ngezixhumanisi esethulweni se-athikili. Lapho iphromoshini yokuqalisa iphela, intengo izoba ngu-$339. Uma umnotho wakho ungakuvumeli, ungathola futhi enye ye-4 Doogee S98 umkhiqizi ayiraffle ngewebhusayithi yakhe ngezixhumanisi ezikhonjiswe ngenhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Sesiyalazi usuku lokwethulwa kanye nentengo ye-Doogee S98 entsha